Vashandisi vakatsoropodza maapplication: dhizaini inotangira pamusoro peunyanzvi | IPhone nhau
Iko kukosha kwekugadzirwa kwakanaka kwekushandisa
Ngirozi Gonzalez | | App store
Dhizaini yezvishandiso yakakosha kuti mushandisi ave nayo mafungiro akanaka kubva zvakafanana. Ehezve, ngatirege kusiya parutivi zvishandiso zveapp: kana chikumbiro chikasazadzisa chinangwa chatinotsvaga, hachizotishandire. Asi zvakakosha kuti unzwe zvakanaka. Tinogona kuona kukosha kwekugadzirwa gore rega rega pamusangano weApple wepagore wekuvandudza: iyo Wepasi Pose Vanogadzira Musangano (WWDC) dzimwe dzakachengetwa kupi? Mipiro yezvakanakisa dhizaini muApp Store yese. Ichi chikamu apo vanogadzira vanogona kuratidza yavo (The AND Ace) simudza ruoko, kutarisa kuti dhizaini yakanaka inogona kukwezva huwandu hwakawanda hwekuburitsa, sekureba sekunge chinangwa chiri kupfuura chakasangana.
Mountain Valley ndeimwe yemitambo yakanakisa-yakagadzirirwa nguva dzose
1 Kana Apple ichiona yakakosha, ichave iri chikonzero
2 Ngatisatore pfungwa kana: dhizaini haisi zvese
Kana Apple ichiona yakakosha, ichave iri chikonzero
Zviripachena kuti chikumbiro chisati chave chikamu cheApp Store chinofanira kupfuudza akateedzana e "mafirita" uye zviyero zvinovimbisa kunaka uye kugadzikana pane zvese zvishandiso kwazvinogona kutorwa pasi. Imwe yeaya mafirita ari mu dhizaini yekushandisa.
Ini handireve chete kune chimiro uye kugoverwa kwemukati zvinhu zvekushandisa kana ini ndichireva dhizaini. Asi kune iyo mhando dzemakara yakashandiswa, mhando yechimiro chakashandiswa, iyo app logo uye pamusoro pezvose, iyo minimalism iyo Apple yakatsigira dzinoverengeka dzekuvandudzwa.
Ngatizviisei zviitwe paApp Store. Ngatifungidzirei kuti tiri kutsvaga app inotizivisa nezve ese Madrid bhazi system. Isu tinotsvaga muchitoro uye tinowana matatu akasiyana maapplication:
Madrid Yechokwadi Nguva Yekutakuravakasununguka
Kana isu tikaongorora iyo logoChekutanga pane zvese, isu tinoona kuti EMT Madrid ine logo yakapusa asi zvinofadza kune rakashama ziso zvichienzaniswa, semuenzaniso, Madrid MBC iyo ine grey gradient uye nhatu nzvimbo dzepakati dzemavara akasiyana dzisingagare zvakanaka paziso. .
Zvinokosha: Ini ndinogadzira katsamba kukuzivisa iwe kuti aya marudzi ekutonga anozviisa pasi zvachose. Asi, zvine mutsindo, inogona kuderedzwa kuburikidza nemagadzirirwo ekuti ndeapi anokodzera maitiro kusvika kune minimalism mukati meApp Store.
Chechipiri, iyo chako pachako dhizaini. Mune ino kesi, EMT Madrid neMadrid Bus EMT Interurbanos zvakafanana, nepo Madrid MBC ine dhizaini inoputsa neyakajairwa kune minimalism inoratidzwa neIOS 10.
Ngatisatore pfungwa kana: dhizaini haisi zvese
Sezvandamboreva, dhizaini yakakosha, asi hazvisi zvese. Pane dzakawanda nguva, isu tichafanirwa kushandisa zvinotyisa kunyorera zvinosangana nezvatinoda. Mune zviitiko izvi panongova neapp imwechete ine basa rakati, iyo kushanda kweiyo app kuchakunda pamusoro pekugadzirwa kwayo.
Asi kana isu tikaongorora mutongo wakazara, ivo vanogadzira vanofunga zvese izvi zvinhu zvatakaongorora kumusoro kumusoro. Ivo vanoziva izvozvo vashandisi vakatsoropodza uye vanotsvaga kukwana. Iwe unofarira maapplication asina kugadzirwa zvakanaka uye anoshanda kana ane makuru magadzirirwo uye kushomeka kwekushanda?
Mufananidzo - Tympanus
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » App store » Iko kukosha kwekugadzirwa kwakanaka kwekushandisa
Runtastic Moyo Rate PRO, yemahara kwenguva shoma
Apple inogona kutengesa inotevera iPhone isina waya charger zvakasiyana